यमन शान्ति वार्ता स्वीडेनमा शुरु हुँदै « Pariwartan Khabar
२० मंसिर २०७५, स्वीडेन
चार वर्षदेखि जारी गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने उपायको खोजी गर्न यमन सरकार र बिद्रोहीबीचको शान्ति वार्ता बिहीबार स्वीडेनमा शुरु हुँदैछ ।
झुक्किएर अर्कै पार्टीलाई मत हालेको भन्दै एक मतदाताले काटे आफ्नै औंला !
०६ बैशाख २०७६, काठमाडौं यत्तिबेला भारतमा लोकसभा चुनावको रौनकता छाईरहेको छ । बिहीबार दोस्रो चरणको
भष्ट्राचारको आरोप लागेका पेरुका पूर्वराष्ट्रपतिले गरे आत्महत्या !
०५ बैशाख २०७६, काठमाडौं भष्ट्राचारको आरोप लागेका पेरुका पूर्वराष्ट्रपति आलान गार्सिया ले आत्महत्या गरेका छन्
आरोहणको लागि ३६० आरोही सगरमाथातर्फ !
०५ बैशाख २०७६, काठमाडौं यस सिजनमा सगरमाथा आरोहणका लागि सोमबारसम्म नेपालसहित ४६ मुलुकका ३ सय
तीन महिनापछि नेमार मैदान फर्कदैँ